Archive du 20190701
Fandresena manan-tantara Lavon’i Madagasikara i Nizeria
Nanakoako tamin’ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ny zava-bitan’ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra hatry ny halina.
Harena azo amin`ny tsy ara-dalàna Ho avy amin’izay ny fanagiazana
Hofaritana tsy ho ela ny foibe hitantana ny resaka fanagiazana ny harena azo amin`ny tsy ara-dalàna.
Ben’ny tanànan’i Mahajanga I Mokhtar Tsy mampihatra didim-pitsarana fa akaiky ny Filoha ?
Nisy fandroahana mpiasa tao amin’ny Kaominina Ambonivohitr’I Mahajanga nataon’ny Ben’ny tanàna Atoa Mokktar Salim Andriatomanga.
Andry Rajoelina Tsy nanome fanenan-tsazy sy famotsoran-keloka…
Toa tsy nisy ny kabarin’ny filoham-pirenena ho an’ny Malagasy fanao isaky ny fetim-pirenena.
Taratasin’i Jean Alefa foana eeee
Dia ahoana Jean a ? Maka anareo foana hoy aho izahay na ahoana na ahoana ny fandehany eo.
CINDH Mila jerena akaiky ny fenitry ny kianjan`i Mahamasina
Nanao fanambarana ny vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny zon`olombelona (CINDH) manoloana ny famoizana ain`olona nandritra ny lanonana tao Mahamasina ny 26 jona lasa teo.
Ministeran’ny fitsarana Ankasitrahana ireo mendrika
Ny ministeran` ny fitsarana dia miezaka hatrany mametraka fanamby handresena ireo laza ratsy mihatra amin` ny Fitsarana.
Fanosehana teny Mahamasina Karohina ireo nahavanon-doza…
Nandray fepetra ny fitondram-panjakana nanoloana ny zava-nitranga tetsy Mahamasina ny harivan’ny alarobia 26 jona lasa teo ka nahafatesana olona 16 isa be izao.
Tambin-karaman`ny HCJ “Diso kajy ny fiarahamonim-pirenena”, hoy ny filohany
Nandiso ny fanambarana nataon`ireo fiarahamonim-pirenena nokianin`ny fiarahamonim-pirenena ny momba ny tetibola sy tambin-karama ho an`ny Fitsarana ambony (HCJ) Rajaona Andriamanankandrina , izay filoha voalohany eo anivon`ny Fitsarana an-tampony sady filohan`ny HCJ.
Fitondrana sy ady amin’ny kolikoly Tsy maharesy lahatra
Vao niandoha ny fitondrana Rajoelina dia saika nitohivakana ny filazan’ireo mpikamban’ny governemanta fa tsy handeferana na hoe “tolerance zero” ny fisiana kolikoly amin’ireo rafi-panjakana tantanan’izy ireo avy.
Air Madagascar Misedra olana indray
Taorian’ny torolalana iraisam-pirenena avy eo anivon’ny sampandraharaha eoropeanina misahana ny fifamoivoizana ana habakabaka na ny EASA ho an’ireo kaompania mampiasa ireo
Fandresen’ny Barea Korana nanerana ny nosy
Ampoky ny hafaliana i Madagasikara iray manontolo. Nahoraka ny tanàna, indrindra tamin’ireo tanàn-dehibe taorian’ny fandresena miezinezina vitan’ny ekipam-pirenena Malagasy na ny Barean’i Madagasikara.
Teny hoe “Alefa” Lasa tsiriritin’ny afrikanina
Alefa Tunisie, Alefa Benin, Alefa Algerie, Alefa RDC sy ny hafa marobe.
Kempo sy MMA Malagasy Namondrona hery tetsy Andavamamba
Noho ny fiparitahana be loatra misy dia namondrona hery tetsy amin’ny Dojo Dujang Sorang etsy Andavamamba tamin’ny sabotsy
Volley-ball Malagasy hiatrika ny lalaon’ny nosy Nivoaka ny lisitry ny ekipa nasionaly
Mitohy eto Antananarivo ny fampivondronana an’ireo ekipa nasionalin’ny taranja volley-ball lahy sy vavy hiatrika ny lalaon’ny nosy 2019 ho tanterahina any Maurice manomboka amin’ny faha-19 jolay izao.
Reharehan’ny Malagasy !
Tsy mitsanga-menatra ny ekipam-pirenena Malagasy any Egipta fa tena manoratra tantara.
Fikambanana Tandroharena Mitohy ny fanandratana ny kolontsaina malagasy
Soa fa teo ny Barean’i Madagasikara, hoy ny avy eo anivon’ny fikambanana ara-kolontsaina Tandroharena, mamoha indray ny fitiavan-tanindrazana sy firaisankinam-pirenena amin’ny
Zandarimariam-pirenena Tsy misy indrafo ho an’ireo mpandika lalàna
“Tandroka aron`ny vozona ny zandary ary natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy tokony hiray tsikombakomba amin`ireo jiolahy”, hoy ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, Jly Richard Ravalomanana.
Toekarena Amerikanina Mitotongana noho ny politikan’i Donald Trump
Nahitana fiakarana 3.1% ny fitombon’ny harinkaren’i Etazonia tamin’ny telovolana voalohan’ity taona 2019 ity.
Rano fisotro madio Mponina 40 000 no hisitraka izany any atsimo
Vita ny fantsona rano fisotro madio ka vahoaka miisa 30 000 no hisitraka mivantana ny fahazoana izany ireo olona 40 000 isa manodidina, avy ao amin’ny distrikan’i Beloha Androy sy Tsihombe.
Fandraharahana sy tontolo iainana Fahazoan-dalana 26 no navoakan’ny ONE
Mizara amin`ny sehatra valo samihafa eto Madagasikara ireo fahazoan-dalana navoakan`ny ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana (ONE).
Niharam-boina teny Mahamasina Notoloran’ny CNaPS fanampiana
Nanatanteraka hetsika roa ny CNaPS ny zoma 28 jona lasa teo, dia ny fitsidihina ireo mpiray tanindrazana niharam-boina nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena lasa teo sy ny fanatanterahana ny asa tagnamaro,
Association Mère et Enfant Zazalahy 400 ezahina hoforaina hatramin’ny aogositra
Fikambanam-behivavy miezaka manasoa ny mpiara-belona ny “Association Mère et enfant”, tarihin’ny filohany Soafara Ramahandry.
Fokontany Andohatapenaka II Efa manomboka milamina ny fandriampahalemana
Efa manomboka milamina ny fandriampahalemana ao amin’ny fokontany Andohatapenaka II, amin’izao fotoana izao raha somary henjankenjana kely teo aloha,
Alasora Saika raikitra ny sakoroka noho ny delestazy
Raikitra indray ny delestazy tao Alasora ary saika niteraka korontana omaly.
“Autocollant” ho an’ny fiaran’ny mpanao gazety Hivoaka manomboka amin’ity herinandro ity
Hivoaka amin’ity herinandro ity raha araka ny vaovao azo avy amin’ny holafitry ny mpanao gazety ny autocollant natokana hapetaka amin’ny fiaran’ny mpanao gazety sy ny môtôny.
Fiara sy sarety nifandona Roalahy naratra mafy
Voa mafy ilay 12 taona sy 17 taona mpandroaka sarety, naratra koa ireo omby, fahasimbana goavana no nahazo ireo sarety sy fiara nifandona. Ireo no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina
Fiaraha-miasan’ny mponina sy zandary ao Fenoarivobe Omby 4 tamin’ireo 15 lasan’ny dahalo no tafaverina
Omby 15 no lasan’ny dahalo tao amin’ny kaominina Mangatany ka avotry ny mpanara-dia nifandrombonan’ny mponina tany an-toerana sy ny zandary ny efatra tamin’ireo.
Anosibe Zazalahikely iray no maty teo am-pijerena CAN 2019
Loharanom-baovao samihafa no nilaza fa zazalahikely iray no maty niaraka tamin’ny baolina ny alakamisy teo.
Hevi-petsin'ny Tia Tanindrazana
Fandresen’ny Malagasy rehetra
Fifaliana no nandraisantsika mianakavy ny fandresena halina. Na teny an-dalambe na tany an-tokantrano, eny fa na ny teny amin’ny hopitaly ary dia nihoby sy nifaly daholo nahita ny vokatra 2-0 vita omaly.